Hong Kong မြို့မှ ရှူခင်းများ [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > ရသစုံလင် > ရုပ်ငြိမ်နှင့်ရုပ်ရှင် ဓါတ်ပုံကဏ္ဍ > ခရီးသွားမှတ်တမ်းများ > Hong Kong မြို့မှ ရှူခင်းများ
View Full Version : Hong Kong မြို့မှ ရှူခင်းများ
Hong kong ကို ကုမ်ပဏီ ကအလုပ်နဲသွားခိုင်းလို့ အခု HK မှာရောက်ရှိနေကြောင်း ရပ်ဝေးရပ်နီးမှ MEF မောင်နှမ များကိုအကြောင်းကြားအပ်ပါတယ်။ မြန်မာများအတွက် ဗီဇာလျှောက်ရမခက်ခဲပါ။ ငွေလဲလှယ်နှုန်းကတော့ 1 SG$ =5SG$ ပါ။ SG မှာငွေလဲခဲလျင် ပိုရပါသည်။ အစားအသောက် SG ထက် ၃ဆခန်ဈေးကြီးပါသည်။အဝတ်အစား အနည်းငယ် ဈေးသက်သာပါသည်။ရထားခ အတူတူခန်ဖြစ်သည်။ ရထားကို စလုံးမှာလို MRT (Mass Rapid Transit) ဟုမခေါ်ပဲ MTR (Mass Transit Railway) ဟုခေါ်သည်။
HK မှာ ၃ လကြာမည်ဖြစ်၍ SG သို့ပြန်ရောက်မှ ဓတ်ပုံများတင်မည်ဟုစဉ်းစားထားသော်လည်း မအောင့်နိုင်၍ ရှိတာလေးအရင် တင်လိုက်ပါသည်။ကိုရီးယား ကားလို စီးရီးလိုက်လာဦး မည်ဟု ကြိုတင်အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။ (မကြည့်ချင်လျင် ကျော်သွားနိုင်အောင် :D) ။ HK တွင် အဓိက အပိုင်း ၃ခုရှိပြီး လေယာဉ်ကွင်းတည်ရှိရာ Lantau ကျွန်း၊ hong konh ကျွန်း၊ New Territories (NT) ဟုခေါ် သော တရုတ်ပြည်မနင့်ဆက်နေသော အပိုင်းတို့ ဖြစ်သည်။ မြင်သာအောင် အင်တာနက်က မြေပုံလေးပါတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
လေယာဉ်ကွင်းမှ NT သို့အသွားလမ်ဘေး ဝဲယာမှ ရှူခင်းများဖြစ်ပါသည်။ တောင်များပက်လည်ဝိုင်းနေသည် ကိုတွေနိုင်ပါသည်။
လူနေထူထပ်ပြီး မြေပြန့်နဲတဲအတွက် တောင်တွေပေါ်မှာပဲ အဆောက်အအုံ ဆောက်ရပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် မြေပြိုကြခြင်းမှကာကွယ်ရန် slope များကိုထိန်းသန်းပေးရပါတယ်။Slope ရဲ stability ကိုထိန်းထားပုံပါ။
Pennisula ရဲအဓိတ်ပယ်က ကျွန်းဆွယ်ဆိုတော့သူလဲဒီနာမယ်ယူမယ်တဲ။ SG ကPennisula Plaza လိုမြန်မာတွေရှိမရှိတော့မသိပါ။
ည ၈နာရီတိုင်း honk kong ကျွန်းမှအဆောက်အအုံများမှ မီးများ၊ လေဆာများကိုသီချင်းသံများဖြင့် ကစားပြသည်ကိ (symphony of light)
ု NT ကမ်းနားမှ ကြည့်နိုင်ပါသည်။ ညတိုင်း၈နာရီကျော်မှ အလုပ်ကနေ နေတဲနေရာပြန်ရောက်လို့ စနေနေ့ညကျမှ မြင်ရပါသည် :( ။
HK တွင် စလုံးလောက် မြန်မာမများပါ. အရင်ရောက်နေကြသော လူတွေကလဲ မြန်မာသိပ်မတွေမိဟုပြောသည်။ သူတို့ရောက်ခါစကတော့ ဇိမ်ခံ လောင်းကစားသင်းဘော် ကြီးပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သော မြန်မာများရှိသော်လည်း စီးပွါးပျက်ကပ်တွင် လူလျှော့သည့်အထဲ တော်တော် များများပါသွား တယ်လို့ပြောပါတယ်။
နောက်တနေကျတော့ SG ကသူငယ်ချင်းက HK မှာရှိတဲသူ သူငယ်ချင်းကိုပြောပြထားလို့ HK ကသူငယ်ချင်း ကလိုက်ပို့ပေးမယ်ဆိုပြီး Avenue of star ကိုလိုက်ပို့ပေးပါတယ် ။ နောက်တယောက်ကိုပါ ခေါ်လာပါတယ်။ အဲဒီညီမလေး ၂ယောက်က ဖုန်းကက်ဈေးသက်သာသော နေရာကိုလဲ လိုက်ပို့ပေးပါတယ်။ ချိန်းထားတဲ နေရာယောက်မှစမြင်ဘူးပြီး နာမည်ပြောပြီး မိတ်ဆက်ကျပါတယ်။ မြန်မာတွေစည်းလုံးကြပုံ ကို HK ကိုအတူလာတယ် မလေးတရုတ်မက အံ့ဩပါတယ်။
hong kong ကျွန်းဘက်ကို boat နဲအသွား boat ပေါ်ကနေလှမ်းရိုက်ထားတာပါ။
hong kong ကျွန်းအနီးကပ်မြင်ကွင်း
ခုနက boat စစီးတဲ လှေဆိပ်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ မြို့လေးကို သွားတဲ့လမ်းလေးနဲ့ အတူတူပဲ...
(စိတ်ကူးထဲမှာပဲ ဒီလမ်းလေးကို ပြန်ရတယ်... ခုတော့ အ်ိမ်ပြန်လို့ တောင်ပေါ်တက်တိုင်း ကုသိုလ်ကို ရလို့.......
ဘုရားစာတောင် မေ့သွားရမယ့်... ???
ရှုခင်းလှလို့.... ကြက်သီးတော့ နည်းနည်း ထတာပေါ့နော်.. ကျွန်တော်တို့ မြို့လေးဆီ ပြန်တဲ့လမ်းက...
မ chitsuelay တင်ပေးတဲ့ ပုံအတိုင်းပဲ.... :( )
မchitsuelay ရေ ကျွန်တော်တို့က ဘယ်မှမသွားနိုင်တော့ သွားတဲ့သူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံလေးပဲကြည့်ရတာပေါ့ဗျာ.......
(ဟဲဟဲ.......... :2: :2: ကျွန်တော်တို့အိမ်နားကအတိုင်းပဲ.............. အဲဒါကြောင့်မသွားတာ)
ဟောင်ကောင် ကျွန်းကိုသွားလည်တုံးရိုက်ထားတဲ ရှူခင်းလေးတွေပါ။ Bank of china tower နဲ lippo center တို့ရဲအနီးကပ်မြင်ကွင်းလေးပါ။
ဟောင်ကောင်ပန်းခြံ ထဲက လှမ်းမြင်ရတဲ lippo center ၂ခုပါ။
ဟောင်ကောင်ပန်းခြံ ထဲက ငှက်လှောင်အိမ်ကိုဖြတ်ပြီးမြင်ရတဲ မြို့ပြအဆောက်အအုံများ။
Victoria Peak ဆိုတဲ တောင်ပေါ်တနေရာကိုသွားဖို့ စီးရတဲရထားနဲ ရထားစီးဖို့စောင်နေတဲလူတွေပါ။
တောင်ပေါ်ကို 45 degree ခန်စောင်းပြီး တရွေ့ရွေ့တက်လာနေတဲရထားပါ။
တောင်ပေါ်ကမြင်ရတဲ တောင်ရဲဘေးပတ်လည်က ရှူခင်းတွေပါ။
တောင်စောင်းမှာဆောက်ထားတဲအိမ်တွေပါ။ အင်မတန်လှတဲရှူခင်းတွေနဲ သန့်ရှင်းတဲသဘာဝပတ်ဝန်းမှာ အိန်ဆောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ အင်မတန် ချမ်းသာတဲသူတွေဖြစ်မှာပေါ့။
ဟောင်ကောင်ကျွန်းပေါ်က shopping center တစ်ခုက interior decoration လေးပါ။
ဟောင်ကောင်ကျွန်းက တောင်ကုံးတောင်စောင်းတွေများလို့ လူတွေသွားလာရေးအဆင်ပြေအောင် ကားလမ်းတွေရဲအပေါ်မှာ လူသွားလမ်ကိုဆောက်ထားပြီး အတက်ဘက်ကိုအလိုလျောက် ရွေ့လျားစက်တွေတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ အဆင်းဘက်ကတော့ မွေးရာပါ ရွေ့လျားခြေထောက် နဲပြန်လာနိုင်ပါတယ်။
ဗြိတိသျှ ခေတ်ကလက်ကျန် tram လို့ခေါ်တဲ လျှပ်စစ်ကြိုးများနဲချိတ်ဆက် မောင်းရသောကားရထားပါ။
p.s ဟောင်ကောင်မှာထူးခြားတဲအတွေအကြုံတစ်ခုကတော့ မနေ့က typhoon တိုက်မယ်လို့ကြေငြာလို့ရုံးစောစောပြန်ရခြင်းနဲ နောက်တနေ့ မနက် 10 နာရီမှ typhoon ကင်းရှင်းကြောင်းကြေငြာလို့ဒီနေ့ နေ့လယ် 12:30မှ ရုံးစတက်ရပါတယ်။
01 October 2009, Chinese National Day တုန်းက ဟောင်ကောင် မှာ မီးပန်းတွေ လွတ်တာကို သွားကြည့်တုန်းကပါ
သီတင်းကျွတ်လပြေ့နေ့ မီထွန်းပွဲတော်က ဟောင်ကောင်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ မယုံနိုင်လောက်အောင် အံ့ဩခဲရပါတယ်။
သီတင်းကျွတ်လပြေ့နေ့မှာ အမွေးတိုင်တွေစိုက်ထားတဲ မီးနဂါး အကလဲရှိသေးတယ်။
မီးနဂါးမလာခင် ဘုံတီးတာ အရင်ကြည့်ရသေးတယ်။
မီးနဂါးမလာခင် လေဒီဝင်း (ရာဇာဝင်း ဒေဝါဝင်း မဟုတ်ပါ) အရင်လာပါတယ်။
မိုက်တယ်မချစ်ဆူးလေးရေ ရောက်ဖူး ချင်လိုက်တာအရမ်း ပဲ အစား အသောက်တွေ်ဈေးကြီးတယ်ဆို တော့ ပုရွက် နဲ တော့ ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး အစားအသောက် နဲ့ ပဲ မွဲ လိမ့်မယ် ဟီးဟီး
အောက်တိုဘာလလယ်က စလုံးကသူငယ်ချင်းလာလည်လို့ Disneyland ကို သွားလည်ခဲ့ကြပါတယ်။ သူ့ပုံကိုရိုက် ကိုယ့်ပုံသူရိုက်နဲ့ တနေကုန် ဓတ်ပုံတွေရိုက်လိုက် စီးစရာတွေလျှောက်စီးလိုက်နဲ့ ညနေ 7pm ရောက်လို့ Halloween Parade နဲ့ 8pm မှာလုပ်တဲ့ fire work အ အချိန်ကျမှပဲ MEF အတွက် ဓတ်ပုံတွေရခဲ့ပါတော့တယ်။ :D